समय द्वारा - Thermomix व्यंजनहरु | थर्मोराइकिप्स (पृष्ठ २)
अनानास र खरबूजाको साथ फ्रोजन दही स्मूथी
धेरै चिसो दही हिला वा स्मूदी, १ मिनेटमा तयार, स्वादिष्ट, स्वस्थ, मूत्रवर्धक, फाइबरयुक्त र कम क्यालोरी
एप्पलको साथ रातो गोभी कति राम्रोसँग मिल्दछ! के तपाईंलाई एप्पल र रातो क्याबीजको गार्निश याद छ?
चिसो आडू क्रीम
यो चिसो आडू क्रीम सिरप मा आरु संग बनाइएको छ। यो आरु सल्मोरजो जस्तै देखिन्छ, तर हामी यसमा अदुवा र मसलाहरू थप्दछौं।
भेगन एभोकैडो डु boats्गा
यी शाकाहारी एवोकैडो डु boats्गा तयार गर्नुहोस् र तपाईंसँग द्रुत र स्वस्थ डिनर १० मिनेटमा तयार हुनेछ।
पुरानो शैलीको चटनीमा गालहरू
पुरानो शैलीको सॉसमा गाल एक परम्परागत खाना हो जुन सम्पूर्ण परिवारले मनपराउँछ। एक मधुर, रसीला र कोमल मासु, तरकारीहरू र मासुको आफ्नै रसको साथ घटाइएको सासमा कभर। हामी तपाईंलाई थर्मोमिक्सको साथ गाल कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउँछौं ताकि यो स्वादिष्ट हुन्छ।
धनिया मेयोनेजले तपाईंको ग्रिल गरिएको भाँडामा स्पार्क थप्नेछ, चाहे ती तरकारीहरू हो, मीट वा समुद्री खाना पनि। यसलाई बार्बेक्युमा तयारी गर्न रोक्नुहोस्।
जैतुन संग चिसो बीट क्रीम
एक चिसो बीट क्रीम, क्यालोरी कम, यस कन्दको सबै सुविधाहरू र गुणहरूको फाइदा लिन आदर्श: क्यान्सर-क्यान्सर, एन्टी-एनीमिया, गर्भवती महिलाहरूको लागि आदर्श र उमेर विरोधी। र केवल cal 43 क्यालोरीको साथ।
क्रिन्की फूलगोभी र मसलादार सुगन्धको बिल्कुल भिन्न किसिमको क्रीमीय नारियलको सास जसले हामीलाई भारतको हृदयसम्म पुर्‍याउँछ।
परम्परागत स्विडेनी नुस्खे पछिको, कसरी घरगुती बटर कुकीहरू बनाउने सिक्नुहोस्
ड्याse्ग सलाद वा पोलेको, पकाइएको वा बाफ गरिएको तरकारीका लागि कडा करी सॉस आदर्श। र तयार गर्न धेरै चाँडो!
स्ट्रबेरी एप्पल स्मूदी
एक सरल, कम खर्चिलो विटामिनले भरिएको: स्ट्रबेरी, स्याउ र दुध। सानाको खाजाको लागि आदर्श। तपाइँको Thermomix को साथ गर्न को लागी धेरै सजिलो
आम र झींगाका साथ एवोकैडो टिम्बाले
यस avocado टिम्बालको साथ तपाईंको पाहुनाहरू सर्प गर्नुहोस्। एक सजिलो, द्रुत र स्वादिष्ट गर्मी स्टार्टर।
परम्परागत, रसिलो र स्वादिष्ट गाईको स्टू, जुन आलुको साथ थियो एक आदर्श डिश हो। अग्रिम तयारी गर्नका लागि उत्तम।
डिटाक्स शेक जुन इजाबेल प्रेयस्लर जवान रहनको लागि लिन्छ। वा त उनले भन्छन्।
ताजा कोमल गहुँ सलाद
ताजा कोमल गहुँ सलाद एक धेरै सन्तुलित विकल्प हो जहाँ अनाज, कच्चा तरकारी र बीउहरूको पोषण मिल्दछ।
अदुवा र काजूको साथ मौसमी तरकारी मिक्स
मौसमी तरकारीको यस मिश्रणमा मुख्य घटकको रूपमा ब्रोकोली हुन्छ, यससँगै गाजर, प्याज, अदुवा र काजूको टचले सजावट गर्दछ।
सलादका लागि सिजर सॉस, मूल नुस्खा थर्मोमिक्समा अनुकूलित
भेगन कुस क्यूस
शाकससको प्लेट प्लेटमा तरकारीहरू र बदामहरू, शाकाहारीहरू र शाकाहारीहरू र कम-क्यालोरी डाइट अनुसरण गर्नेहरूका लागि उपयुक्त।
स्ट्रबेरी र पेपरमिन्ट मूस
छिटो र स्वादिष्ट मिठाईले तपाईंको भोजनलाई उज्यालो बनाउँदछ। मात्र minutes मिनेटमा तपाईले एउटा स्फूर्तिदायी र स्वादिलो ​​चम्चा मिठाई तयार पार्नुहुनेछ।
साल्मन क्युब्सको साथ स्वादिष्ट सब्जी स्टू, मुख्य पकवानको रूपमा आदर्श। यसको रस र स्वादले यसलाई तपाईंको मनपर्ने माछा व्यञ्जन मध्ये एक बनाउनेछ।
पोर्स टेंडरलिन करी सॉसको साथ
करी सॉसको साथ पोर्क टेंडरलिन एक सजिलो र धेरै पूर्ण विधि हो। र त्यो पनि विदेशी स्वादहरु को पूर्ण छ।
हामी यो पार्स्लीको साथ पारंपरिक पेस्टो सॉसलाई पुनर्निर्मित गर्दछौं, जसले तपाईंको पास्ता व्यंजनहरूमा एकदमै फरक स्पर्श दिन्छ।
केरा र nocilla स्मूदी
बच्चाहरूको स्नैक्सको लागि उत्तम स्वादिष्ट दलिया, केरा र निकिला मिल्क शेक
परमेसन केक पपहरू
स्वादिष्ट र मूल परमेसन केक पप, साथीहरूसँग एपीरिटिफको रूपमा राख्नका लागि आदर्श।
फूलगोभीको साईड डिश, लीकसहित, प्याज र टमाटर, क्यालोरी कम र बनाउन सजिलो
भेगन पेस्टोले परम्पसनको लागि ब्रीउरको खमीरको प्रतिस्थापन गरेर परम्परागत जीनोइज पेस्टो विधि अनुकूल गर्दछ। पास्ता र तरकारीहरू सँगै राख्नको लागि एक आदर्श सास।
दही सॉसको साथ टेंडरलिन र हरियो सिमीहरू
दही सॉसको साथ टेंडरलिन र हरियो सिमीहरू पूरै डिश हो जहाँ प्रोटीन र भिटामिनहरू मिल्दछन् र तपाईं 30० मिनेट भन्दा कममा तयार हुनुहुनेछ।
मीठा सोया सॉसमा मशरूमको साथ कुखुराको स्तन
मशरूमको साथ कुखुराको छाती मीठो सोया सॉसमा नुहाईएको छ, सेतो चामल वा कुसकसको साथ एक साइड डिश।
मान्चेगो चीजको साथ आलु ग्रेटिन
आलु र मन्चेगो चीज चीज ग्रेटिन एक गार्निश हो जुन हामी अन्य व्यंजनहरू जस्तै मीटबलहरू वा मासु स्टूहरूसँग प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं।
फ्रिज भएको तरकारी स्टू
फ्रिज भएको सब्जी स्टू कुकबुकहरूको क्लासिक हो जुन हामीले हाम्रो खानामा बिर्सनु हुँदैन किनभने यो एक स्वस्थ डिश हो।
हेजल्नट र काली मिर्च सॉसको साथ स्पेगेटी
हेजल्नट र काली मिर्च सॉसको साथ स्पेगेटी एक डिश हो जहाँ सबै सामग्रीका स्वादहरू पूर्ण रूपमा मिल्दछन्।
केरा, स्याउ र टेंजरिन स्मूदी
पौष्टिक केरा, स्याउ र टेंजरिन स्मूदी। जाडोको चिसो प्रतिरोध गर्न र डेयरी र फलफूलको राम्रो सेवनको ग्यारेन्टी गर्न उत्तम।
Veganesa: शाकाहारी मेयोनेस
Veganesa एक शाकाहारी मेयोनेस सॉस हो, सोया दूध, सूर्यमुखी तेल, नुन र कागती संग बनेको। द्रुत र सजिलो।
सुगन्धित मटर क्रीम
मटरको संग सुगन्धित क्रीम एक हल्का नुस्खा र तयार गर्न धेरै सजिलो छ। व्यक्तिहरूको लागि आदर्श जो उनीहरूको आहारको ख्याल राख्न चाहन्छन्।
Zucchini cannelloni एक धेरै मौलिक नुस्खा हो जसको साथ बेचामेलको फाइदा लिन जुन तपाईंले अर्को तयारीबाट छाड्नुभयो।
मह र अदुवा चटनी संग मशरूम
मिठाई र खट्टा मशरूम एक कारमेलयुक्त मह, अदुवा र कागती चटनीमा डुबाइयो। स्वादिष्ट
स्ट्रबेरी र किवीको साथ वसन्त स्मूदी
स्ट्रबेरी किवी स्प्रिंग स्मूथीमा फलफूल र दही सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यसको स्वाद र मलाईदार बनावटलाई धन्यवाद, यो एक स्वादिष्ट स्नैक्स हुनेछ।
आधारभूत नुस्खा: थर्मोमिक्समा चीज ग्रेट गर्नुहोस्
थर्मोमिक्सको साथ आधारभूत नुस्खा घरमा पनीर ग्रेरेट गर्न र हाम्रो मनपर्ने मिक्सहरू बनाउँदछ। हाम्रो भान्सा मा एक आवश्यक छ
अदुवा र स्पियरमिन्ट पेस्टोको साथ Zucchini
अदुवा पेपरमिन्ट पेस्तो ग्रील्ड वा स्टीम्ड तरकारीहरूको लागि स्वादिष्ट साइड डिश हो।
थर्मोमिक्समा चकलेट पग्लिन र क्रीमी पिघलिएको चकलेट प्राप्त गर्न मूल टेक्निक
गाजर र टमाटर क्रीम
गाजर र टमाटर क्रीम यसको रंगको लागि बाहिर खडा छ जसले इंगित गर्दछ कि यो भिटामिन, खनिज र बेकारोटेन्सको एक उच्च स्तरले भरिएको छ।
रसो रक्सीको साथ रिसोटो
रातो रक्सीको साथ उत्तम रिसोट्टो। धेरै सरल किनभने यससँग केवल कुखुरा वा तरकारी ब्रोथ, परमेसन चीज र, प्रमुख घटक, एक राम्रो रातो वाइन छ
सुन्तला र केरा स्मूदी
स्वादिलो ​​सुन्तला र केरा स्मूदी जुन हामी नास्ताको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं वा स्फूर्तिदायी खाजा तयार गर्नका लागि।
बेकन कार्बोने इम्पानडा
प्याज, चीज र क्रिमबाट बनेको र क्रीमयुक्त कार्बोरा सॉसले भरिएको स्वादिष्ट र रसीला इम्पानेडा। तातो वा चिसो पिउन आदर्श।
मूल विधि: समृद्ध मैश आलु
समृद्ध मैश गरिएको आलु एक साधारण तयारी हो, जहाँ आलुहरू कम तापक्रममा दुधमा पकाइन्छन्, स्वादिष्ट स्वाद लिने प्युरी प्राप्त गर्दछन्।
डबल चोको मफिनहरू
भ्यालेन्टाइन डेमा आश्चर्यचकित गर्न स्वादिष्ट डबल चकलेट मफिनहरू। ब्रेकफास्टको लागि एकदम उत्तम र एक स्वादिष्ट कफि वा चियाको साथ खाजा।
मूल विधि: अदुवा लसुन पेस्ट
अदुवा र लहसुन पेस्ट भारतीय खाना र प्राच्य खानामा व्यापक रूपले प्रयोग गरिएको मसला हो।
Zucchini Parmesan केक
झुकिनी र पार्मेसनको सानो व्यक्तिगत केक, पगाले पनीरले भरिएको, एपिरेटिफको रूपमा आदर्श वा हल्का डिनरको पूरक हो।
टोस्टास स्क्र्याम्बल अण्डाहरू र पेस्टो सॉसको साथ
पेस्टो सॉस पास्ता भाँडाका लागि मात्र होइन तर अन्य तयारीको लागि पनि यो उत्कृष्ट साथी हो जसमा यो टोस्ट सफा गर्ने अण्डाहरू हुन्।
नरिवल, अनानास र मितिहरूको साथ दही स्मूदी
यो अनानास मिति नरिवल दही स्मूदी २ मिनेटमा बनाउँदछ। यो स्वस्थ, हल्का र स्वादिष्ट हुन्छ।
पर्सिममोन क्रीम कप
पर्सिममोन क्रीम गिलास एक मिठाई हो जुन अग्रिम, द्रुत, सजिलो र फलमा आधारित बन्न सकिन्छ।
गिनिज कालो बियर र कोकोबाट बनाएको आश्चर्यजनक केक। यसले कसैलाई पनि उदासीन छोड्ने छैन।
लसुन संग पालक
एक हल्का प्लेट, वजन नियन्त्रण आहारको लागि आदर्श। पालक लसुन, एक शाकाहारी र शाकाहारी आहार को लागी धेरै स्वस्थ तरीका संग sautéed।
वाटरक्रिस र अखरोट पेस्तो सॉस
तपाईं यो वाटरक्रिस र अखरोट पेस्टो सॉस तपाईंको पास्ता डिसेस वा स्क्रमबल अण्डाहरूसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
चिनी, आईसिंग चिनी, आईसिंग चिनी, नेभा चिनी, पाउडर चिनी वा पाउडर चिनी Icing। त्यहाँ धेरै सर्तहरू छन् कि कन्फेक्शनरीमा आवश्यक, यस पाउडर चिनीलाई नाम दिनुहोस्। थर्मोमिक्समा यो १ मिनेटमा तयार छ।
एप्पल पाई, एप्पल पाई वा स्पन्ज केक, कुनै सम्प्रदाय यो टुक्रालाई नाम दिन प्रयोग गरिन्छ। यसमा दालचिनी, मह, स्याउ र नटहरू छन्।
मसलेको आलु, बेकन र टमाटर सॉसको क्यासरोलहरू
यो एक सजीलो गर्न सकिने नुस्खा हो जुन बचेको मसलाएको आलु र हाम्रो मनपर्ने घरेलु टमाटर सॉसको साथ सजिलैसँग बनाईन्छ।
कुसुसको साथ अदुवाको कुखुरा
अदुवा र सोया सॉसको साथ स्वादिलो ​​कुखुराको स्वाद, कस्कोसको साथ सेवा गरियो
आधारभूत नुस्खा: फुलिएको आलु
मसलेको आलु एक आधारभूत नुस्खा हो कि गार्निशको रूपमा वा अन्य तयारीहरूको लागि एक घटकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं यसको चिकनाई बनावटबाट आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ।
अनानास, कागती र अजवाइन डिटोक्सिफाइifying रस
अनानास, अजवाइन र निम्बू डिटोक्सिifying्ग रस। फ्याट बर्न प्रभाव र मूत्रवर्धक कार्यको साथ, यो एक साँचो विष क्लीन्जर हो
Cava को साथ किवी शर्बत रिफ्रेस गर्दै, क्रिष्टमस लन्च र पाठ्यक्रमहरूको बीच डिनरको साथ उत्तम।
नौगट क्रीमको साथ पीच
स्वादिष्ट र एकदमै साधारण मिठाईको लागि दुई विकल्पहरू, घर बनाउने र छिटो: सिरपमा पीचहरू नौगट क्रीमले भरिन्छ।
आम को करी सॉसको साथ राजा झींगा
एक प्रस्तुतिमा एक स्वादिष्ट छुट्टी एपेटाइजर जसले कुनै तालिकालाई अनुग्रह दिन्छ। आम करी करी सॉसको साथ झींगा पनि एक सस्तो र कम क्यालोरी प्रस्ताव हो।
केरा र मन्डारिन स्मूदी
स्वादिष्ट र पौष्टिक केरा, दूध र मन्डारिन स्मूदी। क्रिसमसको बिदाको समयमा फलहरूको उपभोगको ग्यारेन्टी गर्न योग्य।
स्ट्रबेरी जामको साथ क्याम्बर्ट त्रिकोणहरू
स्वादिष्ट क्याम्बरट पनीर त्रिकोण, साझा गर्न क्रिसमस एपेटाइजरको रूपमा आदर्श। हाम्रो मनपर्ने जाम सँगसँगै तिनीहरू रमाईलो हुनेछन्।
नरिवल टेम्पुरामा झींगा
नरिवल टेम्पुरामा झींगा राम्रो विकल्प हो यदि हामी अनौपचारिक खाना वा खाजा तयार गर्न सोच्दै छौं।
होममेड टेक्स-मेक्स शैली टाकोस
स्वादिष्ट र स्वादिष्ट मेक्सिकन टाकोस, भरिएको टेक्स्ट-मेक्स शैली। साथीहरूसँग साझेदारी गर्न एक वास्तविक खुशी।
डिटॉक्सिफाइंग स्याउ, अजवाइन, काकडी र कागती जुस। यो एक डिटक्स जूस वा हरियो जुस हो, खाना, तनाव र शहरी जीवन शैली द्वारा उत्पादित विष हटाउनको लागि आदर्श हो। र यो स्वादिष्ट छ।
ग्रीक दही रिसोट्टो
उत्कृष्ट र स्वादिष्ट ग्रीक शैली रिसोटो, फेटा चीज, कालो जैतून र ग्रीक दहीको साथ बनेको। तालुमा क्रीमी र उत्तम।
Shiitake मशरूम संग Parmesan सूप
पनीर प्रेमीहरूको लागि स्वादिष्ट परमेसन चीज सूप, शियाटेक मशरूमहरू र हेजलनाटको साथ। क्रिसमस को लागी एक उत्तम स्टार्टर।
हिउँद फल दलिया
स्वादिष्ट र पौष्टिक दलिया, जाडो मौसम फलले बनेका, बालबालिका, वृद्ध र च्युइंग समस्याका साथ व्यक्तिहरूका लागि उत्तम।
यस एन्टिऑक्सिडन्ट रसमा अनार, स्ट्रबेरी र टमाटर, फलहरू हुन्छन् जसले उनीहरूको बुढेसकालको शक्तिलाई भिटामिन सीको उच्च सामग्रीसँग मिलाउँदछ, जसले प्राकृतिक रक्षाहरूलाई मजबूत बनाउँदछ, साथ ही एन्टी-क्यान्सर गुणहरू र बहु ​​लाभदायक प्रभावहरू।
मूल विधि: बेचामेल
Bechamel एक आधारभूत नुस्खा हो जुन हाम्रो सूचीबाट हराउन सकिदैन। यसले हामीलाई क्रोक्वेट्स, लासग्ना, इत्यादि जस्ता स्वादिष्ट तयारीहरू गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
ताजा तरकारी स्टू
एक ताजा, स्वस्थ र हल्का सब्जी स्टू, थर्मोमिक्सको साथ १ minutes मिनेटमा बनाईयो। स्वादिष्ट
तरकारी संग मशरूम
तरकारीको साथ यो मशरूमको गार्निश चेन्टेरेल्स (वा रिबोलोन), गाजर, लीक, टमाटर, लसुन र सेतो वाइनको साथ बनेको छ। यो साँच्चै स्वादिष्ट छ।
टर्की मीटबलहरू र prunes
टर्की र प्रुन मीटबलहरूमा एकदम राम्रो सँगै झर्ने स्वाद हुन्छ। यसलाई तपाइँको मनपर्ने गार्निशसँग मिलाउनुहोस् र तपाइँसँग धेरै पूर्ण डिश हुनेछ।
केरा दलिया र बच्चाहरूको लागि कुकीहरू
दूध खाना, केवल १ मिनेटमा, दूध, निम्बू, केरा र कुकीजको साथ अभिव्यक्त गर्नुहोस्। सजिलो र पौष्टिक।
स्टिउड अउबर्गिनहरू दालचीनी र गदाको स्वादको नुस्खा हो जुन चिसो र वर्षाको दिनमा सान्त्वना दिन्छ।
एवोकैडो र स्मोक्ड सामन क्वाशे
एक स्वादिष्ट एवोकैडो र स्मोक्ड सामन क्वाच, तयार गर्न धेरै सजिलो र एक अपरिटिफको रूपमा वा बेलुकाको खानाको रूपमा।
मल्लोर्कन ओमलेटले कारीगर उत्पादनहरू लाई जोड गर्दछ जस्तै माहिन चीज र सोब्रसदादा, जुन यस विधिमा एक शानदार रंग थप्न।
धेरै सजिलो कडा उमालेको अण्डा pate
स्वादिलो ​​र साधारण कडा उमालेको अण्डा pate, टोस्ट वा सेतो रोटी मा फैलाउन आदर्श। अचम्मित पाहुनाहरूका लागि उत्तम।
Nocilla र mascarpone क्रीम
यो क्रीम रमाइलो छ। योसँग nocilla (वा nutella), mascarpone र केला छ र पेस्ट्रीहरूमा भरनेको रूपमा आदर्श हो।
यो एक सजिलो, स्वादिष्ट र धेरै सरल चकलेट केक हो। आटा minutes मिनेटमा बनाइन्छ, त्यसोभए तपाईंले यसलाई ओभनमा राख्नुहुन्छ र आधा घण्टामा हामीसँग खानेकुरा तयार छ
टमाटर र ट्याबस्को सॉसमा मसलादार मीटबलहरू र मसलाको साथ अनुभवी। दोस्रो कोर्सको रूपमा र अग्रिम तयारीको लागि आदर्श।
थाई शैली झींगा करी
थाइल्याण्डबाट ताजा, नरिवलको दूधको साथ यो झौं करीले तपाईंलाई टाढा ठाउँहरूमा लैजान्छ। कन्ट्रास्ट र स्वादको पूर्ण, यो एक आदर्श स्टार्टर हो।
एकदम सजिलो पर्सिमन डेसर्ट, सम्पूर्ण परिवारको लागि उत्तम। हामी यसलाई कुकीहरू, योगर्ट्स र पर्सिमन्सको साथ गर्छौं, केही क्षणमा, हाम्रो Thermomix लाई धन्यवाद।
जादुई केक वा कप केक
यस जादुई केकको साथ तपाईं युवा र वृद्ध सबैलाई आश्चर्य चल्दै हुनुहुन्छ। Themmix को साथ आटा तयार गर्न धेरै सजिलो छ र कपमा पकाइएको छ, माइक्रोवेभमा।
चिनियाँ चाउचाउ, मकै र कुखुराको सूप
नूडल्स, मकै र कुखुराको साथ स्वादिष्ट र सान्त्वनादायी चीनियाँ सूप। नाजुक तर स्वादिष्ट स्वाद, बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि आदर्श।
आटा स्टू कोडको साथ
कडको साथ स्वादिष्ट आलु स्टू, चिसो र वर्षाको दिनको लागि एक स्टार्टरको रूपमा आदर्श। बच्चाहरूका लागि उत्तम र एक धेरै सरल र द्रुत विधि।
Chistorra र टमाटर संग मकरोनी
चिस्टोर्रा र होममेड फ्राइड टमाटर सॉसको साथ स्वादिलो ​​र रसीला मकरोनी, जवान र वृद्धको लागि उपयुक्त र टुपरवेयरमा लिनको लागि उत्तम।
ब्ल्याकबेरी र हरियो स्याउ mousse
यो ब्ल्याकबेरी र हरियो स्याउ mousse आश्चर्य छ किनकि यो एक नरम र हल्का बनावट साथ साथै स्याउ को लागि crunchy छ।
एक चीज र एवोकैडो केक जुन एक माइक्रोवेभमा १ minutes मिनेटमा पकाउँदछ, एक शानदार स्वाद र रंगको साथ।
बदाम, नरिवल, सोया र महको सासको साथ चिकन
एक पकाउने तरीका जुन भारतीय खानालाई पूर्वीय भोजनसँग मिसाउँदछ। बदाम, नरिवल, सोया सॉस र महको एक मलाईदार सॉसमा कुखुरा स्तनहरू। स्वादिष्ट
एवोकाडोको साथ साल्मोरजो
परम्परागत साल्मोरजोको पुन: व्याख्या, रोटी बिना र एवोकैडोको साथ, क्रीमी र अपूरणीय बनावटको साथ।
मेयोनेज एली oli संग आलु
अलि ओलीसँग एक स्वादिष्ट आलु, क्लासिक स्पेनिश तपो। स्टार्टर, अपरिटिफ वा डिनरको रूपमा आदर्श।
धूम्रपान गरिएको सालमनको साथ नरिवल एजोलान्को
धूम्रपान गरिएको सालमनको साथ नरिवल अज्लाब्न्कोले यसलाई एक प्रामाणिक डेलिकेटेसनमा परिणत गर्न परम्परागत एजॉलान्कोलाई पुन: व्याख्या गर्दछ।
पराग्वेयन आइसक्रीम शेक
प्याराग्वेन-आधारित आइसक्रिम ताजा गर्दै गर्मीका दिनहरूमा आफैलाई स्फूर्ति प्रदान गर्न। बच्चाको खाजा वा डेजर्टको लागि उत्तम।
घरमा बदाम बटर तयार गर्नु सरल, छिटो छ र हामी यसलाई आफ्नो मनपर्ने बनाउन बढी वा कम नुनको साथ र विभिन्न बनावटका साथ बनाउन सक्दछौं।
बच्चाहरूको लागि कुखुरा र टमाटर एक्सप्रेसको साथ धान
कुखुरा र टमाटरको साथ धानको एक्सप्रेस रेसिपी, सानाको लागि उत्तम। स्वस्थ, छिटो, सस्तो र स्वादिष्ट। एक तरकारी क्रीम संग उत्तम यो आदर्श हो।
रातो र पहेंलो बेरको रस
रातो बेरको रस एक धेरै सजिलो र द्रुत रस हो, वजन घटाउन र तौल नियन्त्रण आहारको लागि ठूलो गुणहरू सहित।
मन्चेगो चीज डोनट्स
ब्रेकफास्ट वा खाजाको रूपमा लिन मन्चेगो चीज डोनट्स एक राम्रो विकल्प हो। चिसो कटौती वा जाडो जस्तै टमाटरको साथ तिनीहरूलाई साथ दिनुहोस्।
यो स्मूदी एक कम क्यालोरी दही र खरबूज स्मूदी हो, धेरै स्वस्थ, स्फूर्तिदायी र स्वादिष्ट, आहारको लागि र खानाको बीचमा लिनको लागि आदर्श हो।
काखरी र हेम Quiche
यस कासनी र हेम Quiche ले तपाईंलाई यसको मौलिकताको लागि र विभिन्न सामग्रीहरू द्वारा प्रदान गरिएको स्वादहरूको संयोजनको लागि मुख्य रूपले छक्क पार्नेछ।
गैलिशियन आलु आमलेट
आश्चर्यजनक गैलिशियन शैली आलु आमलेट, हेम, चिया चीज र पेप्रिकाले भरिएको। रसिलो र स्वादिष्ट, यो खानाको लागि उत्तम विकल्प हो।
जर्मन आलु पेनकेक्स (kartoffelpuffer)
Kartoffelpuffers जर्मन भोजन को विशिष्ट हो। यी जर्मन आलु पेनकेक्स एक स्याउ कम्पोटेको साथ सेवा गर्दछन् जसमा हामीले थोरै रायोको मिश्रण दियौं। स्वादिष्ट
मिनी चेरीहरू र गेन्जिज पेस्टोको साथ मोज्राएला skewers
चेरी टमाटर, मोजारेला र जेनिस पेस्टो सॉसको साथ बनेको स्वादिष्ट मिनी स्कीभर्स। एक स्टार्टर र खाजा को रूप मा आदर्श।
होरचटा र फिग स्मूदी
ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने ठाउँको लागि उपयुक्त, होरचटा र नेभिरहरूसहित बनेको स्फूर्तिदायी स्मूदी।
साल्पिकन एक ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरु बराबर उत्कृष्टता हो। सजिलो, द्रुत र कम क्यालोरी।
यस गर्मी को एक पेय को रूप मा पिउन आदर्श स्फूर्तिदायी Mojito।
लसुन च्याउको साथ फ्रेन्च आमलेट
स्वादिष्ट फ्रान्सेली आमलेट, लसुन मशरूमको साथ बनाईएको र अजमोदको साथ अनुभवी। द्रुत र कम क्यालोरी डिनरको लागि आदर्श।
टकसालको साथ एभोकैडोका लागि शाकाहारी रेसिपी। एक एपेरिफको रूपमा क्रुडिट्सको साथ आदर्श।
यो तरबूज साल्मोरेजो वा तरबूज पोर्रा एक स्वादिष्ट चिसो तरकारी क्रीम हो। यो गजापाचो जस्तै छ, तर क्रीमियर, राम्रो र स्वादिष्ट बनावटको साथ।
तरकारी र छोलाको कुचस एक धेरै पूर्ण विधि हो जुन विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तर सँधै समान स्वादिष्ट परिणामको साथ।
चिसो तरबूज र काकडी क्रीम
ताजा चिसो तरबूजा र काकडी क्रीम, पुदीना र दही संग गार्निश, को तल्लो दिनको लागि एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श। २ मिनेट भन्दा कममा तयार
टमाटरको साथ मीटबलहरू
धेरै साधारण मीटबलहरू जो स्वादिष्ट हुन्छन्: बाहिर क्रन्ची (उनीहरूको विचित्रको लागि धन्यवाद) र भित्रबाट रसदार।
विशिष्ट साल्मोरेजोको आफ्नै संस्करण, जुनमा हामी तरबूजेका लागि टमाटर परिवर्तन गर्दछौं। परिणाम स्वादिष्ट छ: गर्मी को लागी एक धेरै ताजा क्रीम। यो स्वादिष्ट छ
न्यानो जुच्चीनी, फेटा र पुदीना सलाद
तातो Feta चीज र पुदीना सलाद एक छिटो, सरल र स्वादिष्ट नुस्खा हो Feta चीज यो अद्भुत स्वाद धन्यवाद।
नुन मानचेगो चीज केक
यो नुन मानचेगो चीज केकको साथ हामी ती हार्ड टुक्राहरूको फाइदा लिन सक्छौं जुन बिर्सिएको छ र तिनीहरूलाई खानाको लागि स्वादिष्ट विधिमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं।
ओरिएन्टल कुखुरा पासा sautéed तरकारी लाठी संग
स्वादिष्ट ओरिएंटल शैली कुखुरा पासा, प्रकाश sautéed तरकारी लाठी संग। कम फ्याटको दोस्रो कोर्सको रूपमा आदर्श।
चामल, अनानास र चिकन सलाद
यो अनानास चिकन चामल सलाद बनाउन र परिवहन गर्न सजिलो छ। हामी बाहिर खाने सबैको लागि उत्तम।
पाइन नट, क्र्याब र अण्डा ग्रेटिनको साथ पालक
स्वादिष्ट पालक, सँगै क्र्याब स्टिकहरू, पाइन नटहरू र अउ ग्रेटिन अण्डा, प्रकाश र कम फ्याट डिनरको रूपमा आदर्श।
कुखुराको साथ एक चामल, मीठो र हल्का, नरम तर स्वादिलो ​​र धेरै धनी, तपाईंले देख्नु हुनेछ। खानालाई अद्वितीय डिशको साथ समाधान गर्नुहोस् जुन जीवनभरको एक हो।
तोर्टा डेल कासारमा स्पेगेटी
क्रीमयुक्त र स्वादिष्ट स्पेगेटी, टोटाटा डेल कासार चीजमा खाईन्छ। छिटो, सरल र एक अद्वितीय स्वादको साथ।
वजन घटाउने आहारहरूको लागि तरकारीको रस
तरकारी जूस भोजनको बीचमा लिनुहोस् जब तपाईं आहारमा हुनुहुन्छ। स्लिमि or वा वजन नियन्त्रण डाइटहरूमा तपाईंको भोक जगाउन सजिलो तरीका।
मस्कारपोन क्रीमको साथ चेरी टबहरू
मस्कारपोन क्रीमको साथ चेरीको जारहरू बनाउन सजिलो छ कि बच्चाहरूले समेत हामीलाई उनीहरूलाई तयार पार्न मद्दत गर्छन्। यो १० मिनेटमा पनि तयार हुन्छ
मीठा दही र फल tartlet
दही र फल क्रीमले भरिएको यी मीठा टार्टलेटहरू स्वादिष्ट र नाश्ता बनाउन सजिलो छ, कफिको साथ सेवा दिनको लागि हामीसँग पाहुना छ भने।
टार्टलेट्स साल्मन मूसका भरिएका छन्
साल्मन मूस टार्टलेट्स तालुको लागि उपचार हो, सजिलो र द्रुत व्यंजनता जुन तपाईको पाहुनाहरुलाई अपेरिटिफमा चकित पार्न।
मटर गुआकामोल, वा गिसानमोल, गुआकामोलसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर एभोकैडोको सट्टा मटरको प्रयोग गर्दछ। यो dips, nachos वा tostadas संग परोसाइएको छ।
आइसक्रीम, कफी र कारमेल स्मूदी
यो छिटो र सजिलो हल्लाले पाहुनाहरूसँग खानाको लागि उत्कृष्ट चिसो मिठाई बनाउँछ।
ग्लुटन मुक्त नरिवल केक
यो नरिवल स्पन्ज केकको धेरै राम्रो बनावट र एक स्वादिष्ट स्वाद छ। यसमा गहुँको पीठो छैन, celiac रोगले पनि लिन सक्छ।
सुपर भिटामिन सी जुस
फलफूल र तरकारीहरूको उत्कृष्ट संयोजन, जसको साथ हामी भिटामिन सीले भरिएको एक उत्तम रस बनाउनेछौं।
कालो जैतुन र काजू पाटे
एक शाकाहारी तरकारी प्याट, कालो जैतुन र काजूको साथ बनेको। यो जैतुन पाटे एक उत्कृष्ट ऐपेटाइजर हो र अन्य व्यंजनहरू जस्तै पास्ता वा सलादहरूमा बहुमुखी थप।
मटर र पाकेको ह्यामको साथ पास्ता
यसले आधा घण्टा भन्दा कम लिन सक्दछ र बच्चाहरूलाई मटर खानका लागि उत्तम हुन्छ। तर यो यति राम्रो छ कि सम्पूर्ण परिवारले यसलाई मन पराउँछन्। हामीलाई यो प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्!
बाख्रा पनीरको साथ लीक्स अ ग्रेटिन
बाख्रा पनीरको साथ लीक्स अ ग्रॅचिन भोजनको लागि सजिलो र स्वादिष्ट हुन्छन्। तिनीहरू नरम छन् तर धेरै बास्ना पनीरलाई स्वादका साथ स्वादका साथ।
हामी तपाइँलाई सिध्याउँदछौं कि तत्काल चामलको पिठोले सानालाई चामलको क्रीम कसरी बनाउने जुन हामी थर्मोमिक्सको साथ घरमा तयार गर्नेछौं।
चमेली चामल सलाद
चमेली चामल र विभिन्न तरकारीहरू, टूना र टर्कीबाट बनेको धेरै स्वस्थ सलाद, निम्बूको पोशाकको साथ नुहाइन्छ।
क्रीम चीज र दहीको साथ बेंच
द्रुत र धेरै सजिलो मिठाई: सफ्ट क्रिम चीज, दही र गाढा दुधको साथ सिरपमा आडू।
चिकन रोल र कालो जैतुनहरू
साधारण कुखुरा र कालो जैतून रोल जुन उनीहरूको द्रुत तयारीको कारणले हामीलाई दैनिक मेनुहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ।
सलाद इमल्शन, प्रयोग गर्नको लागि एक उत्कृष्ट नुस्खा जब हामीसँग बाँकी सलाद छ। एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श।
Vichysoisse को लागी परम्परागत फ्रान्सेली नुस्खा को एक संस्करण, leeks कोल्ड क्रीम। यसले गाजरलाई समाहित गर्दछ जसले यसलाई फरक र स्वादपूर्ण स्पर्श दिन्छ।
PEAR र रास्पबेरी को रस
यो स्वादिष्ट नाशपाती र रास्पबेरी को रस हामीलाई उच्च गुणवत्ताको भिटामिन र खनिज प्रदान गर्दछ। फलहरूको सेवन सुन्दर शरीर देखाउनको लागि आवश्यक छ।
एप्पल, बीट र कागती जुस
एन्टिऑक्सिडन्ट र डिटोक्सिफाइंग रस, कम क्यालोरी र भिटामिन, फलाम र खनिजहरूले भरिएको, वजन घटाउने आहारहरूको पूरकको रूपमा आदर्श।
अन्डा जडिबुटीले भरिएको
जडीबुटीले भरिएका अण्डाहरू पिकनिकको लागि बाहिर निकाल्न वा अफिसमा खानको लागि उत्तम विकल्प हुन्छन्। तिनीहरू अग्रिम तयारी गर्न सकिन्छ।
लोकप्रिय आइओली सॉसको एक नयाँ संस्करण (एलीओली वा एजोसाइट) एवोकाडोको साथ बनाईएको। स्वादिष्ट र धेरै सजिलो।
लसुन मशरूम एपेटाइजर
लसुन च्याउ च्याप एपेटाइजर स्न्याकि forको लागि उत्तम हो किनकि यो छिटो, स्वस्थ र कम क्यालोरी हो। यसलाई तपाईंको मनपर्ने लाइट ड्रिंकको साथ सेवा गर्नुहोस्।
टेक्स्ट-मेक्स भोजनबाट स्वादिष्ट माचो नाचोस, साथीहरूसँग साझा गर्नको लागि एक आदर्श स्नैक।
चकलेट एक्सप्रेस ब्राउनी
Ch मिनेटमा चकलेट ब्राउन तयार छ। यो माइक्रोवेभमा पकाइएको छ। यो छिटो, सजिलो र स्वादिष्ट हो, यस्तो प्रकारको जुन तपाईंको ध्यान दिए बिना गायब हुन्छ।
डिटक्स शेक फल र तरकारीहरू खान को लागी एक सजिलो र स्वस्थ तरीका हो। यो हिलाउने, सेलिब्रेटीहरूको साथ लोकप्रिय, तपाइँ तपाइँको आदर्श वजन कायम गर्न मद्दत गर्दैन।
टमाटर सॉस, किसमिस र पाइन नटको साथ कोड क्रुम्ब्स
एक परम्परागत नुस्खा Thermomix अनुकूलित: एक स्वादिष्ट टमाटर, प्याज र काली मिर्च सास, रसमिस र पाइन नट संग कोड crumbs। स्वादिष्ट
प्राकृतिक अनानास को रस
एक प्राकृतिक अनानास को रस, धेरै स्वस्थ र क्यालोरीमा कम, अनानासको सबै गुणहरू, minutes मिनेटमा र एक शानदार परिणामको साथ बनाईएको।
आदर्श एपेटाइजर: क्रीम चीज र ब्रेज्ड टर्कीको साथ स्वादिष्ट टार्टलेटहरू, कालो जैतूनको, गुलाबको सुगन्धको साथ। बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि उत्तम।
एक हल्का र सरल स्टार्टर बनाउन तर एकै समयमा धेरै धनी र एक सुन्दर प्रस्तुतीकरणको साथ। कद्दू क्रीम तयार गर्न को लागी द्रुत र सजिलो तरीका।
झींगा र वसन्त सिमी संग स्पेगेटी
झींगा र स्प्रि be गेडाहरूको साथ स्प्यागेटी भनेको पास्ता र बजार उत्पादनहरूका साथ र color्ग र स्वादले भरिएको नुस्खा हो। एकलका लागि विशेष।
निलो चीज क्रीमको साथ बीट मूस
पाहुनाहरूसँग खाजाको लागि धेरै रंगीन अपरिटिफ। तयार गर्न धेरै सजिलो छ, यो सेवाको समयसम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ।
चिकन र एप्पल क्यानेललोनी
चिकन र एप्पल क्यान्नेलोनी एक लोकप्रिय नुस्खा र साप्ताहिक मेनूको लागि एक महान स्रोत हो, जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूले मनपराउँदछन्।
एक सजिलो, छिटो र धेरै पौष्टिक विधि। चामल कस्टर्डहरू विशेष गरी बुढापाका वा बच्चाहरूका लागि भोक हुँदैनन्।
औबर्जिन पाटे (बाबा गानोस)
बाबा गानोस्च एक भुनेको ओबर्जिन पेटी हो, अरबिक खानाको विशिष्ट। हामीले स्याउ थपेका छौं र परिणाम स्वादिष्ट हुन्छ।
लसुन, तेल र खोर्सानीको साथ स्पेगेटी। दोस्रो पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श र त्यस अवसरहरूको लागि जब हामीसँग खाना पकाउन समय हुँदैन। द्रुत र सजिलो विधि।
क्यानेरियन रातो पिकान मोजो सॉस
क्यानिरी टापुबाट भर्खरै आइपुगेको उत्कृष्ट र स्वादिलो ​​रातो पिकोन मोजो सॉस, झुम्काएको आलु, मासु, तरकारी वा माछाको लागि एक पक्षको रूपमा आदर्श।
आलु र चार्टको साथ तरकारी प्यानकेक्स
यी चार्ट, आलु, चीज र किसमिस प्यानकेक्स भेजी बर्गरहरू जस्तै छन्, तर चुलीमा पकाइन्छन्। तिनीहरू क्यालोरी कम छन् र बच्चाहरूलाई तरकारी खानको लागि एक राम्रो समाधान हो।
PEAR र निम्बू को रस
द्रुत, सजिलो र क्यालोरीमा कम, यस नाशपाती र कागतीको रस ऊर्जा, खनिज र भिटामिनको स्रोत हो। स्टेभियाको साथ मीठा
क्रिप्स चीज र शतावरीसँग भरी
क्राइपहरू स्वादिष्ट पेनकेक्स हुन् जसले चीज नहुने र धेरै स्प्रि combination्ग संयोजनको साथ यस प्रकारको अन्त्य भर्न अनुमति दिन्छ।
पाकोरास भारतीय भोजनको एक विशिष्ट डिश हो। तिनीहरू चिनीको पीठोमा हालेको तरकारीहरू हुन्, जसमा मसला र मसलादार मिश्रण मिसाइन्छ र तिनीहरूलाई दही सॉसको साथ परोकाइन्छ।
छोलाको साथ कद्दू क्रीम
छोलाको साथ कद्दू क्रीम एक नम्र र उपयोगी नुस्खा हो जुन पहिलो पाठ्यक्रमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको बनावट बुढा व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त छ।
लेमन स्टिउ आर्टिचोकस
निम्बूको साथ बनाइएको आर्टिचोकसको लागि यो नुस्खा विशेष रूपमा एकलहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो केवल 85 and क्यालोरीको साथ सजिलो र द्रुत नुस्खा हो।
स्ट्रबेरी र चकलेट विनाग्रेटको साथ हरियो सलाद
चकलेट भिनाग्रेटले हरियो स्प्राउट्स, स्ट्रबेरी, चीज र काजूको शानदार सलादमा माथि छ। स्वाद र उपस्थितिमा एक शानदार संयोजन।
एक सजिलो नुस्खा recipe मिनेटमा तयार छ: अचारको सिपीदार pâtâ। एक राम्रो बनावट र एक हल्का स्वादको साथ Mussel, टुना र क्रीम चीज।
ह्याम र आमलेट राम्रो जडीबूटाहरूको साथ रोल गर्दछ
राम्रो जडिबुटीको साथ हेम र टर्टिला रोलहरू बनाउनको लागि द्रुत तयारी हो। तपाइँको मनपर्दो चीज र राम्रो जडीबूटाहरूको मिश्रणको साथ प्रयास गर्नुहोस्।
घरेलु कोलाकाओ वा घरेलु घुलनशील कोकोका लागि विधि, जहाँ हामी थर्मोमिक्सको साथ पिठो टोस्ट गर्न पनि सिक्नेछौं।
भरिएका मशरूमहरू केही कम क्यालोरीहरूको साथ साधारण डिश हो। छिटो बनाउनको लागी र तपाईं एक आहार मा छन् भने तपाईं तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
एक तातो टमाटर र सब्जी क्रीम, टोफू र croutons साथ। यो एक चम्चा थाल, हल्का, स्वस्थ र क्यालोरी कम छ, जुन पनि धेरै राम्रो छ।
गाढा चकलेट मुटुको साथ सेतो चकलेट कउलेट
गाढा चकलेट मुटुको साथ सेतो चकलेट कउलन्ट, जुन प्रकट हुन्छ र खन्याइन्छ, पग्लिन्छ, जब यसको आन्तरिक ठाउँमा पुग्दछ।
रोजमेरी एन्टि-कोल्ड इन्फ्यूजन
एन्टी-कोल्ड इन्फ्यूजन रोजमेरी, मह, निम्बू र अदुवामा आधारित छ जुन चिसोसँग लड्न र न्यानो गर्न पर्याप्त प्राकृतिक सार प्रदान गर्दछ।
स्ट्रबेरी तातो चकलेट
मौलिक स्ट्रबेरी तातो चकलेट, एक हल्का र हल्का स्वादको साथ। धेरै सजिलो र गर्न चाँडो। भ्यालेन्टाइन दिवस को लागी एक विशेष खाजा।
तरकारी भरिएका मिर्च
तरकारी भरिएका मिर्च - शाकाहारी, पूर्ण रूपमा शाकाहारी, हिन्दु-प्रेरित पकवान।
सेतो फिश बर्गर, एक द्रुत र सजिलो नुस्खा, बच्चाहरूको लागि आदर्श।
Zucchini र बाख्रा पनी मिनी tortillas
यी स्वादिष्ट zucchini र बाख्रा पनीर मिनी tortillas जवान र वृद्ध रमाईलो हुनेछ। केवल १०० क्यालोरीको साथ धेरै पूर्ण र सन्तुलित तयारी।
पकाएको चामल कुखुरा र आर्टिकोकसको साथ
पकाएको चामल कुखुरा र आर्टिचोकससँग एक पूर्ण पूर्ण विधि हो जुन मासुको प्रोटीन र आर्टिचोकको फाइदाहरूसँग मिसाउने उत्तम अन्नलाई मिसाउँदछ।
प्राकृतिक सिट्रस र गाजर को रस minutes मिनेटमा
गाजर, सुन्तला र निम्बूबाट बनेको उत्तम र स्वादिलो ​​प्राकृतिक जुस, फ्लुबाट मुक्त हुन आवश्यक भिटामिन र पौष्टिक तत्त्वहरू।
अंजीर सॉसको साथ गाल स्ट्यु
एक मासु स्ट्यू, विशेष गरी सुँगुरको गाला, कोमल र महयुक्त बनावट र सुक्खा अन्जीर र पेद्रो ज़िमिनेज वाइनको साथ बाक्लो र मीठो चटनी, जसले तपाईंलाई प्रत्येक काटनेमा रमाउँदछ।
एन्कोभी बटर सर्पिलहरू
एन्कोभी, लसुन र अजमोदको बुटरले भरिएको काटिएको ब्रेड सर्पिलको स्वादिष्ट एक्सप्रेस एपेटाइजर।
टमाटरको साथ चीज स्यान्डविच र अखरोटको साथ चीज पनीर स्यान्डविच
टमाटर सहित पनीर स्यान्डविच र अखरोट संग चीज पनी सैंडविच स्यान्डविच रोडिल्लाको प्रसिद्ध श्रृंखलाको दुई विशेषताहरू हुन्। मूलसँग मिल्दोजुल्दो स्वादको साथ हामीले पास्ता प्राप्त गरेका छौं। पारिवारिक समारोह, सुरूवात वा स्नैक्सको लागि आदर्श।
Gratin गाजर एक सजिलो नुस्खा हो कि एक सानो बेचामेल सॉस संग तैयार छ। गाजर स्वादिलो ​​हुन्छ किनकि ती जीराका स्वादिष्ट हुन्छन्।
Muesli संग किवी क्रीम
फल, ग्रीक दही र महले बनाएको स्वादिष्ट किवी क्रीम। त्यो हाम्रो मनपर्ने म्यूस्ली संग एक धेरै पूरा बिहानको खाजा हुनेछ।
तरकारी संग ब्राउन चावल
एक स्वस्थ र कम क्यालोरी रेसिपी, एक शाकाहारी भोजन व्यंजन संग क्रिसमस ज्यादतीहरू कम गर्न
किशमिश र महको साथ कुकिज
सामान्य चकलेट कुकीजको एक अनुकूलन, किशमिश र महले बनेको।
Foie सॉस ती बहुमुखी सॉसहरू मध्ये एक हो जसले सामान्यतया साधारण डिशको सफलता सुनिश्चित गर्दछ। यसले मासुको साथ उत्तम संयोजन गर्दछ, तर तपाईं यसलाई तरकारी वा पास्तासँग पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
क्रिस्पी नौगट मफिनहरू
क्रिसमसको बखत परिवारसँग बाड्नका लागि घर बनाइएको कडा बदाम नौगट मफिनहरू आदर्श छन्।
कावा र पचारिन ककटेल
नयाँ वर्षको पूर्वानुमानको लागि प्रस्ताव: काभा र पचारिन ककटेल, जहाँ हामी प्रसिद्ध स्लो ब्राण्डी (पेटक्सरन, बास्कमा) कावा र सुन्तलाको रसको साथ मिक्स गर्नेछौं।
जैतून र चेरी टमाटरको साथ तातो सलाद
यो एक पक्ष को रूप मा वा एक स्टार्टर को रूप मा सेवा गर्न सकिन्छ। शाकाहारी पाहुनाहरूको लागि आदर्श, यो तातो सलाद हाम्रो छुट्टी मेनूमा उत्कृष्ट देखिनेछ।
अण्डा लिकर छिटो र Thermomix को साथ बनाउन सजिलो छ। एक दिन अघि यो रक्सीको तयारी गर्नुहोस् र तपाईंको पाहुनाहरूलाई उनीहरूलाई मनपराउने पेयले चकित पार्नुहोस्।
दही र caramelised बादाम को साथ Persimmon मीठा
एक द्रुत, हल्का र सरल मिठाई जुन क्रिसमस तालिकामा धेरै राम्रो देखिन्छ।
पनीरको साथ बेक्ड स्केलपहरू
Scallops au gratin ती मानिसहरूका लागि द्रुत र सजिलो विधि हो जुनसँग खाना बनाउनको लागि समय छैन र जहाँ समुद्र र भूमिको उत्तम संयोजन छ।
टमाटर सलाद chives र तुलसी oregano vinaigrette संग
तुलसी र ओरेगानो भिनाग्रेट ससको साथ टमाटर सलाद स्फूर्ति प्रदान गर्दै। मासु वा माछाको दोस्रो डिशको साथ साथ आदर्श।
Cava संग नीबू शर्बत
क्रिसमसको बिदाको लागि एक आवाश्यक: कावाको साथ लिम्बू शर्बत। धेरै सजिलो र धेरै छिटो।
यो रस फलामको अभाव रक्ताल्पता (फलामको अभावले गर्दा एनीमिया) विरूद्ध उत्कृष्ट प्राकृतिक उपचार हो। बीटले हाम्रो शरीरमा फलामको महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ र सुन्तलाको रसले यसको अवशोषणलाई सजिलो गर्दछ।
मिनी निम्बू दही टार्टलेट्स
मिनी निम्बू दही टार्टलेट्स यी क्रिष्टमस दिनहरूको लागि आदर्श मिठाई हो। तिनीहरूसँग एक गहन सिट्रस स्वाद छ, एक विशाल रात्रिभोज पूरा गर्न उत्तम।
हेम, कद्दू र च्याउको साथ तरकारी स्टू
यो तरकारी स्टू तातो, स्वस्थ, पौष्टिक, कम क्यालोरी र धेरै स्वादिष्ट पकवान हो।